Ihe na-esi ísì ụtọ Bottle Evolution: Otu senti, ụzọ mmeghe
Site na akụkọ mgbe ochie na akụkọ mgbe ochie, isi na-esi ísì ụtọ dị omimi na akụkọ ntolite ogologo. Kemgbe ụwa, akụkọ siri ike esiwanye ike ịchọpụta, otu esi eji mmanụ senti agbanweela na teknụzụ.
Ihe na-esi ísì ụtọ agbanwe:
Ọ bụ senti, sitere na Latin kwa fum, nke pụtara 'site na anwụrụ ọkụ' .A na-eji ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ eme ihe site na iji ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ, na-efe chi dị iche iche, ọ na-anọchi anya ihe dị nsọ na enweghị nsọ.
Otu n'ime ihe ndị kachasị dị mkpa n'akụkọ ihe mere eme nke senti, nke ka, mere ka usoro mmịpụta mmanụ sikwuo ike, imepụta mmanụ na-abawanye, na ojiji nke mmanụ ahụ abụghịzi naanị ezinụlọ eze. na karama nke ihe na-esi ísì ụtọ, a na-ejikarị cork dị ka ihe nkwụsị iji kwụsị isi ísì ya, a na-ejikwa mkpanaka nyocha iji tinye mmanụ na-esi ísì ụtọ na nkwojiaka na n'olu.
3.Ha ofufe dị ụtọ
Tupu ọbịbịa nke karama ịgba agba, a na-ejikarị ndị na-agba mmanụ mee ihe na-esi ísì ụtọ. Drop senti na onye ofufe iji wepụ ihe na-esi ísì ụtọ n'oge eji ya. Ihe ederede ihe ofufe ahụ pụrụ iche, nke dabara adaba maka ịmịnye mmanụ, nwere ike ịme ihe na-esi ísì ụtọ na onye ofufe ahụ. Kemgbe mmalite nke ihe ịgba mmanụ na-esi ísì ụtọ, ndị na-akwado ya aghọwo ihe ngosi na ụlọ ahịa na-esi ísì ụtọ.
Na 1907 omumu nke mbu mmanu mmanu (”Perfumers“) bu ihe mbu putara ihe na otu esi esi eji mmanu mmanu eme ihe. O na eme ka mmanu mmiri na mmanu ya ghari ma fesa ya site na mmiri. malitere ụlọ ọrụ ọhụrụ, ndị na-emepụta ihe na-emepụta ihe efu, ihe ịgba na-agba agba na-agba ndị mmadụ ume ịchekwa ihe nsure ọkụ kachasị amasị ha ogologo oge o kwere mee.
5.Ọrụ ebube na Atakor na 1930s
Igwe ihe na-esi ísì ụtọ nke oge a nwere ụdị isi mmiri abụọ, ihe na-egosi na mbụ bụ senti nke ihe eji agba airbag, pịa karama mmanụ iji were nwayọ were obere airbag mgbe ị na-eji ya, nwere ike ịgba ịgba alụlụ.
6.Otu n'ime karama mmanụ na-esi isi nke 1907
Ọbịbịa nke ịgba mmiri na-eme ka oge njide nke ihe na-esi ísì ụtọ na-adịgide adịgide. Ruo ugbu a, ọtụtụ ihe na-esi ísì ụtọ bụ iji isi mmiri fesa, na-esi ísì ụtọ site na isi mmiri mmiri.
7.Le Sien, Amour-Amour na Que Sais-Je1925-1928
Iji jide ndị na-azụ ahịa n'anya, ndị na-emepụta ihe arụsi ọrụ ike na nhazi na mkpo ọkpọ karama. Coty wụsara mmanụ na-esi ísì ụtọ n'ime iko nwere akpụkpọ ụkwụ dị elu, nke mara mma ma dị mma. na-adọta mmasị ụmụ nwanyị mgbe niile na oge mbụ.
COMI AROMA – na-enye gị ụdị karama na-esi ísì ụtọ, nnukwu ihe ọ flụ glassụ, na-eme ka senti gị ka mma.